Caydhinta Soomaliya ee Ergayaga gaarka ahi waa fursad qali ah ee yaan la seegin.
Thursday January 03, 2019 - 15:56:50 in Wararka by Shaqaalaha Burcoonline News
`Waa in QM midoobay laga codsada in ay la timado siyaasad laba waji leh oo ay kula kala macaamisho arrimaha Somaliland iyo Somalia ( A Dual track policy).''
``In lala yimado siyaada indho fiiq fiiqan leh oo marxada geeska qaybteeda ka qaadato oo laga baxo siyaasada iminka e ah sug oo arrag,''
Tani waa fursad kale oo ina hortimid Somaliland, caydhinta ay Somaliya ku samaysay ergagii QM. Waa in ay Xukumada Somaliland khasatan wasarada arrimaha dibadu la timada Siyaasad firfircone oo curin leh. Waa in QM midoobay laga codsada in ay la timado siyaasad laba waji leh oo ay kula kala macaamisho arrimaha Somaliland iyo Somalia ( A Dual track policy). Dalbashada qorshaha noocan ah oo ka dulaya in aanay Somaliland ku qacansanay habka iminka jira ee Somaliya doonayso in ay ku afduubto dhaman xafiska qaramada midobay ee ka hawl gala Somaliy iyo Somaliland.
Somaliland waxaa ay tahay in ay si feejigan uga taxadarto wajiga cusub ee isqancinta ku dhisan ee maamulka Somaliya la soo bax, ee ay doonaya in aduunka loo sawiro in ay iyagun ay maamulan dhulkii Somaliya la isku odhan jiray (Somaliland iyo Somaliya).
Addun arrogooda siyaasadedna ka xeeldheer inta inoo muuqato hadii aanay Siyaasada arrimaha dibada ee Somaliland aany la iman falcelin dhumuc leh waxaa inugu so wajahan mawjado siyaasaded iyo farogalin toos ah.
Hore waxa aynu isugu haynay arrimaha hawada oo Muran badani ka taganyahay qaramada midoobayna u xaglinayeen dhinac ilaa iminkana ay ka gaadhi la yihiin goan toos ah. Hadana Somaliya iyada o og in aanay lahay awood muqata oo ay Bada Somaliland ku faro galin karto, waxa ay heshis la soo gashay shirkado iskashato oo china laga leeyahay xoguhuna waxay tibaxayaan in Marakib hubaysani ay dusha ka ilaalahin doonan oo marka ay ka kalumaysanay xeebah Somaliya. Madaam oo sida ay heshiska ku galen biyaha Somalilnd ku jiran ujeedku ugu way waa in ay si caalima ah ugu doodan lahanshiyaha Biyaha iyo ku tagri falka biyaha Somaliland .
Somaliland waxaa la gudboon in ay is firfircoon uga hawl gasha sidii qaramada midoobay uga dhadhicin lahad qorshe laba waji lahe oo ku salaysan Somaliland iyo Somaliya inta arrimohoodu masiiriga ah kala dhamanayan.
Somaliland ma qadi karto in arrimo saameeya xidhidhka ay la leedahay qaramada midoobay in muqdisho goanmo lagaga gadho sida eriga wakilka qaramada midoobay.
In lala yimado siyaada indho fiiq fiiqan leh oo marxada geeska qaybteeda ka qaadato oo laga baxo siyaasada iminka e ah sug oo arrag, siyaasad wax ku darsanaysa qorshayasha mustaqbalka ee geeska.
Mohamad Abdi Adam (Raambe)